KDE dia tsy mijanona amin'ny Krismasy ary miandry ny fiverenan'ny Flipswitch | Ubunlog
KDE dia tsy mijanona amin'ny Krismasy ary mandroso ny fiverenan'ny Flip Switch ao amin'ny Plasma 5.24
Taona maro lasa izay, rehefa nanomboka nampiasa Ubuntu aho, dia tiako ny manitsy zavatra bebe kokoa ary nampiasako ny fampandehanana ny jelly na ny vokatra goba malaza mba hifindra eo amin'ny birao. Azo alaina ho fanitarana ao amin'ny GNOME 3.x koa io effet cube io, ary toa izany KDE Nialona izy ary manomana fiovana ho amin’ny ho avy. Ny iray amin'izy ireo dia ny zavatra hitantsika ao amin'ny fisamborana lohapejy, iray amin'ireo fomba hanehoana ireo varavarankely misokatra.
Ny lahatsoratr'i ity herinandro ity ao amin'ny KDE dia antsoina hoe "Samba Printer Browsing and More", izay heveriko fa tsy mamaritra tsara ny fiovana tsara indrindra izay efa eo anoloantsika ankehitriny. Na dia ny marina dia io Samba io dia asa vaovao, ary ny Ampifamadiho ny Switch sy Cover Switch fanatsarana estetika izany; izay no hanazava izany. Na izany na tsy izany, KDE dia tsy mijanona (amin'ny ankapobeny) na dia amin'ny Krismasy aza, ary ireo no vaovao ho avy izay navoakany androany.
1 Fanamboarana bibikely sy fanatsarana ny fahombiazana tonga ao amin'ny KDE
2 Fanatsarana ny interface-n'ny mpampiasa
3 Rahoviana no ho tonga izany rehetra izany
Fanamboarana bibikely sy fanatsarana ny fahombiazana tonga ao amin'ny KDE
Ny varavarankely Yakuake dia miseho haingana kokoa (Jan Blackquill, Yakuake 21.12.1/XNUMX/XNUMX).
Ao amin'ny fivoriana Plasma Wayland, Yakuake dia tsy miseho eo ambanin'ny tontonana ambony (Tranter Madi, Yakuake 22.04).
Ny Mpitantana Partition dia tsy mitsahatra mangataka fanamarinana imbetsaka raha nofoanana ny bitsika fanamarinana, fa kosa mampiseho hafatra am-pirahalahiana milaza ny olana ary azo amboarina izao (Alessio Bonfiglio, KDE Partition Manager 22.04).
Namboarina ny famotsorana fahatsiarovana amin'ny fampandrenesana (David Edmundson, Plasma 5.18.9).
Ny fijerin'ny kalandrie Digital Clock izao dia mampiseho ny loko marina foana rehefa mampiasa ny lohahevitry ny Breeze Light, na lohahevitra hafa misy loko mazava (Noah Davis, Plasma 5.23.5).
Ny Plasma izao dia mihidy haingana kokoa amin'ny alàlan'ny tsy fanekena fifandraisana vaovao aorian'ny nanombohan'ny fizotry ny fanakatonana, izay tena manampy tokoa rehefa mampiasa KDE Connect (Tomasz Lemeich, Plasma 5.24).
Ny pejin'ny System Preferences izay mitaky fanamarinana rehefa manindry ny bokotra "Ampiharo" dia tsy mampiseho ny tapany tapa-taratasy eo ambanin'ny anarany intsony rehefa mampiasa ny fomba sidebar amin'ny alàlan'ny default (Nate Graham, Plasma 5.24).
Ny singa menus context vaovao "Set as wallpaper" dia manova ny sary an-tsary amin'ny hetsika ankehitriny, fa tsy ny hetsika rehetra (Fushan Wen, Plasma 5.24).
Ny rohy manova ny UI ao amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fananana dia mampiseho ny fampahalalana marina amin'ny toerana marina (olona manana solon'anarana "Dark Templar", 5.90).
Niverina indray ny fiantraikan'ny "Cover Switch" sy ny "Flip Switch", nosoratana vao haingana tamin'ny QML mba hanamora ny fanitarana ho avy. (Ismael Asensio, Plasma 5.24).
Ny singa "Open in Dolphin" ao amin'ny menio contexte desktop dia nosoloina ny "Configure display settings" (Ezike Ebuka sy Nate Graham, Plasma 5.24).
Ankehitriny ianao dia afaka misintona tontonana na aiza na aiza ao amin'ny fikandranao fomba fanovana, fa tsy avy amin'ny bokotra kely fotsiny. Ary miharihary kokoa izany ankehitriny miaraka amin'ny fanampin'ny marika manondro izany (Björn Feber, Plasma 5.24).
Ny fisehon'ny efijery OSD izao dia manondro ny anton'ny haben'ny efijery ao anatiny (Méven Carl, Plasma 5.24).
Rehefa mandefa na mandray rakitra amin'ny alàlan'ny Bluetooth, dia aseho foana ny fampahafantarana rafitra, fa tsy aseho fotsiny raha maharitra mihoatra ny 500ms ny famindrana (Nicolas Fella, Plasma 5.24).
Ny applet Bluetooth izao dia miantso telefaona finday (Nicolas Fella, Plasma 5.24).
Ny tsipika manasaraka ao amin'ny menio misy lohahevitra Breeze dia mahazo padding mitsangana indray (Luke Horwell, Plasma 5.24).
Ny pejin'ny System Préférences mampiseho tsipika tokana na lisitra lehibe dia manana fomba maoderina kokoa tsy misy frame (Nate Graham, Frameworks 5.90).
Ny bokotra Toolbar izay azo fehezina mba hampisehoana sakafo dia hampiseho izany sakafo izany koa rehefa kitihina havanana (Kai Uwe Broulik, Frameworks 5.90).
Rahoviana no ho tonga izany rehetra izany
Ny Plasma 5.23.5 dia ho tonga amin'ny 4 Janoary, KDE Gear 21.12.1 roa andro taty aoriana, amin'ny faha-6, ary KDE Frameworks 5.90 roa taty aoriana, amin'ny 8. Afaka mampiasa Plasma 5.24 isika manomboka amin'ny 8 Febroary. KDE Gear 22.04 dia tsy mbola misy daty voatondro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » dabilio » KDE » KDE dia tsy mijanona amin'ny Krismasy ary mandroso ny fiverenan'ny Flip Switch ao amin'ny Plasma 5.24
Ny Lumina Desktop 1.6.2 dia efa nivoaka ary ireo no vaovao
Ny SuperTux 0.6.3 dia tonga miaraka amin'ny fanohanana ny WebAssembly, fanatsarana ary maro hafa